Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.3.2 Foldit
Foldit waa ciyaar masiibo ah oo isku dhafan oo awood u leh non-khabiirada in ay ka qaybqaataan habka xiisaha leh.
Naqatada Netflix, oo ah mid aan caddaynayn oo cad, ma muuqanayo mashaariicda wicitaanada oo furan. Tusaale ahaan, bixinta Netflix Prize badiba ka qaybgalayaasha halista ah waxay lahaayeen tababaro tirakoob oo tirakoob ah iyo barashada mashiinka. Hase yeeshee, mashaariicda furitaanka ayaa sidoo kale ku lug leh kaqaybgalayaasha aan lahayn tababarka rasmiga ah, sida lagu muujiyay Foldit, oo ah borotiin-isku xoqid.
Qaadashada Protein waa nidaam iyada oo silsilad of amino acids ay qaadataa qaabkeeda. Iyadoo la fahamsan yahay geeddi-socodkan, bayoolajiyadu waxay abuuri karaan borotiino leh qaabab gaar ah oo loo isticmaali karo daawooyinka. Si fudud wax loo fududeeyo, borotiinadu waxay u muuqdaan inay u guuraan qaabka ugu hooseeya ee tamarta, habka lagu dheelitirayo riixitaanka iyo kala jiidashada masagada (sawirka 5.7). Sidaa darteed, haddii cilmi-baaruhu rabo inuu saadaaliyo qaabka uu borotiinka isku laabayo, xalku wuxuu u muuqdaa mid fudud: haddaba isku day inaad isku-dhisto dhammaan qaababka suurtagalka ah, xisaabinta tamartooda, iyo saadaalinta in borotiinka uu isku laabo qaabka ugu hooseeya-tamarta. Nasiib darro, tijaabinta dhammaan hababka suurtogalka ah waa mid aan macquul aheyn sababtoo ah waxaa jira balaayiin iyo balaayiin qaab-dhismeed oo suurtogal ah. Xataa kumbuyuutarrada ugu awoodda badan ee la heli karo maanta-iyo in mustaqbalka-rajada mustaqbalka-kumbuyuutarka mustaqbalka ah kuma shaqeynayo. Sidaa darteed, bayoolajiyadu waxay sameeyeen algorithms badan oo xeel dheer si ay si wax ku ool ah u raadiyaan habka ugu hooseeya-tamarta. Laakiin, inkastoo ay jiraan tiro badan oo ah dadaal cilmi-baaris iyo xisaabeed, ayaa algorithms-ka weli ka fog yahay kaamil ah.
Jaantuska 5.7: Baro barar ah. Muuqaalka sawirrada "Drkjaergaard" / Wikimedia Commons .
David Baker iyo koox cilmi-baaris ah oo ka tirsan Jaamacadda Washington waxay qayb ka ahaayeen bulshada cilmi-baadhayaasha ah ee ka shaqeynaya sidii ay u abuuri lahaayeen habab xisaabeed oo lagu dhajiyo borotiinka. Hal mashruuc, Baker iyo colleagues waxay sameeyeen nidaam u oggolaanaya mutadawiciinta in ay ku bixiyaan waqti aan la isticmaalin kumbuyuutarkooda si ay u caawiyaan barxadda isku dhafka. Soo noqoshada, tabarrucayaashu waxay daawan karaan korjoogeeye muujinaya borogaraamka borotiinka ee ka dhacaya kombuyuutarkooda. Qaar ka mid ah mutadawiciinta ayaa u qoray Baker iyo asxaabtoodu waxay sheegeen in ay fekerayaan in ay kor u qaadi karaan waxqabadka kombiyuutarka haddii ay ku lug lahaan lahaayeen xisaabinta. Sidaas awgeed waxay bilaabeen Foldit (Hand 2010) .
Foldit wuxuu soo rogaa habka borotiinka loo geliyo cayaarta cayaarta oo qof walba oo ciyaaraya. Marka laga eego muuqaalka ciyaaryahanka, Foldit ayaa u muuqda inuu yahay xujo (shaxda 5.8). Ciyaartoyda waxaa lagu soo bandhigaa hab-dhiska seddex-cabbir ee qaab-dhismeedka borotiinka, waxayna samayn karaan hawlo "tweak," "wicle", "dib-u-dhajin" -doo bedel qaabkeeda. Adigoo fulinaya hawlahaas ayaa bedelaya qaabka borotiinka, taasoo markaa kordha ama hoos u dhigaysa dhibcahooda. Xaalad ahaan, dhibcaha waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo heerka tamarta ee qaabeynta hadda; Qodobada hoose ee tamarta ayaa keena dhibco badan. Si kale haddii loo dhigo, dhibcuhu wuxuu ka caawiyaa inuu hagto ciyaartoyda maaddaama ay raadiyaan hababka tamarta yar. Cayaartaani waa suurtagal oo kaliya -waxaa la mid ah sida saadaalinta filimka filimka ee Netflix Prize-protein isku xoqaya sidoo kale waa xaalad ay sahlan tahay in la hubiyo xalalka marka loo eego iyaga.
Jaantuska 5.8: Shaashadda ciyaarta ee Foldit. Ku soo lifaaqay ogolaansho http://www.fold.it.
Naqshadda Foldit ee qaabka loo yaqaan 'Foldit' ayaa u saamaxaysa ciyaartoyda aqoonta yar ee aqoonta biochemistry si ay ula tartanto qaabka ugu fiican ee loogu talagalay khubarada. Inkastoo ciyaartoyda intooda badan aysan ku fiicneyn shaqada, waxaa jira dhowr ciyaaryahan oo shaqsi ah iyo kooxo yaryar oo ciyaartoy ah kuwaas oo si gaar ah u jecel. Xaqiiqdii, tartan madax-ka-dhexe ah oo dhexmaray ciyaartoyda Foldit iyo algorithms-ka-goboleedka cusub, ciyaartoyda ayaa abuuray xalka ugu fiican ee 5 ka mid ah 10 protein (Cooper et al. 2010) .
Foldit iyo abaalmarinta Netflix way ka duwan yihiin siyaabo badan, laakiin labaduba waxay ku lug leeyihiin wicitaan furan oo xalal ah si sahlan oo loo eego marka loo dhalo. Hadda, waxaynu arki doonaa qaab dhismeed isku mid ah oo weli jira meel kale oo aad u kala duwan: Sharciga Patentka. Tusaalihii ugu dambeeyay ee dhibaatada telefoonka ee furan ayaa muujinaya in qaabkan loo isticmaali karo goobo aan caddayn qiyaasta.